“Ronaldaha iminka uma xirfad badna sida Ronaldihii hore oo kale laakiin…” – Gool FM
Byare August 10, 2017
(Europe) 10 Agoosto 2017. Cristiano Ronaldo malahan xirfad dabiici ah sida Ronaldihii reer Brazil, laakiin howl karnimo iyo dhabar adeeg ayaa sare ugu qaaday darajada sida laacibka ugu fiican, waxaa sidaa qaba agaasihii hore ee ciyaaraha Real Marid Arrigo Sacchi.
Ronaldo wayne ayaa ayaa waqti ku soo qaatay Madrid intii lagu guda jiray waqtigii yaraa uu joogay Sacchi bartamihii 2000 isagoo dhaliyay 104 gool 177 kulan uu ka soo muuqday cad cadka 5-sano uu ku sugnaa Santiago Bernabeu.
“Marbaan u kacay inaan la kulmo Carlo Ancelotti markii uu tababaraha ka ahaa Real Madrid, ma garaneysaa qofka halkaa joogay oo saacad iyo bar jimicsi sii sameynayay tababarka ka hor? Cristiano Ronaldo,” Sacchi ayaa sidaa u sheegay Corriere dello Sport
“Ronalda-ha kale, midka reer Brazil ayaa leh tayo badan laakiin waqti badan ma uu jirin maxaa yeelay wuxuu raadinayay oo qura mudnaan gaar ah ee ma uusan dooneyn inuu wax badan ordo.
“Cristiano Ronaldo waa tusaale xirafadle, cilmu nafsiga wuxuu na barayaa inaan lagugu dhalin xirfada, waa wax ay tahay inaad maalin kasta ka shaqeyso si aad u hesho.
“Waa sida uu yahay Cristiano Ronaldo, kor ayuu u qaaday Real Madrid, Real-na sare ayay u qaaday isaga.”.
TOOS u daawo: Sevilla vs AS Roma - LIVE